Magacyada Saddexda Kooxood Oo Ku Tartamaya Goolhaye David De Gea Oo Ka Tegaya Manchester United - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaMagacyada Saddexda Kooxood Oo Ku Tartamaya Goolhaye David De Gea Oo Ka Tegaya Manchester United
Magacyada Saddexda Kooxood Oo Ku Tartamaya Goolhaye David De Gea Oo Ka Tegaya Manchester United
April 6, 2021 Abdiwahab Ahmed Wararka Ciyaaraha Maanta, Wararka Premier League 0
Goolhayaha reer Spain ee David de Gea ayaa albaabka Old Trafford laga furi doonaa marka la gaadho suuqa iibka ciyaartoyda ee xagaaga foodda inagu soo haya, waxaana jira dhawr kooxood oo durba damacooda soo bandhigay.
David de Gea ayaa booskiisii Manchester United uu kala baxay Dean Henderson, kumana soo noqon biraha dhexdooda tan iyo markii uu u safray dalkiisa oo uu ugu tegay xaaskiisa oo umushay.
Dean Henderson ayaa helay kalsoonida tababare Ole Gunnar Solskjaer oo kaydka u diray De Gea, waxaanay wararka soo baxayaa sheegayaan in goolhayahan aanu wax mustaqbal ah ku lahayn Old Trafford.
Warar kale ayaa sheegaya in sida kaliya ee uu kusii joogayo ay tahay in uu ogolaado in mushaharkiisa uu si aad ah u dhimo, iyadoo uu waqtigan yahay laacibka ugu mushaharka badan guud ahaan Premier League.
Si kastababa, wargeyska Dailay Mail ayaa shaaciyey in ay saddex kooxood ay ku tartamayaan sidii ay ula soo saxeexan lahaayeen goolhayahan.
Ateltico Madrid oo ahayd kooxdii uu u ciyaari jiray ka hor intii aanu Manchester United imananin ayaa ugu horreysa, waxaana liiska kula jirta Real Madrid.
Laakiin kooxda damaceedu xaqiiqada yahay ayaa ah PSG oo iyaduna kula jirta tartanka.
Manchester United ayaa la rumaysan yahay in ay saxeexa laacibkan ku xidhayso lacag dhan £40 milyan oo Gini oo ay tahay in ay bixiso kooxda doonaysa.
Atletico ayaa haysata Jan Oblak oo ka mid ah goolhayeyaasha ugu wanaagsan dunida, waxaase doonaya kooxo lacag badan dul-dhigaya, waxaana haddii uu ka tago Oblak ay beddelkiisa ka dhigi doontaa David de Gea.
Real Madrid ayaa iyaduna haysata Thibaut Courtois, waxayse si lama filaan ah ugu soo baxday liiska kooxahan ku loollamaya David de Gea.
PSG ayaa iyaduna haysata Keylor Navas oo ay da’diisu sii weynaanayso waxaanay tahay kooxda uu damaceedu ugu macquulsan yahay.